Ogaden News Agency (ONA) – Abaaraha ka taagan Geeska Afrika iyo waxyaabaha keenay
Abaaraha ka taagan Geeska Afrika iyo waxyaabaha keenay
Waa daraasad uu sameeyay Eng. Badal Ahmed Hassan oo ku takhasusay cilmiga loo yaqaano Environmental Management and engineering, Majisteerna ku sameeyey aqoonta ah – Agriculture Forestry, takhasuska ah Tropical Forest ecology and Silviculture.
Wadamada kuyaala Geeska Africa, oo kala ah Djibouti, Eriteria, Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan iyo Uganda, waxay kufadhiyaan dhul badkiisa lagu qiyaaso 5057124 , Waxaana kunool qiyaas ahaan dad lagu cadaday 187.97 million oo qof, iyada oo tirada korodhka dadka uu yahay sanidkiiba 2.6 % taas oo kadhigan in hadii uu korodhka dadku kusii socdo cadadkaas in ay tirada dadka kunooli gobolka ay noqon doonaan 375.94 million oo ruux sanadka 2037 da. Dhulka ku haboon beerashada ama waxsoo sarka leh ayaa ah oo kali ah 7.2%. Waxaa intaas garabsocota, iyada oo cimilada gobolku uu yahay mid qalalan, taas oo lagu macneeyo marka tirada uumi baxa biyuhuu ay kabadn yihiin biyaha roobka da,a.
Taariikhda Gobolka oo kooban.
Gobolka Geeska Africa laga soo bilaabo dhamaadkii dagaalkii labaad ee aduunka, ilaa iyo maanta wuxuu kujiray xaalad xasilooni dara ah oo kadhalatay intooda badan isku dhacyo siyaasadeed oo udhaxaysa wadamada dariska ah ama shucuubta kalagadisan ee Africaanka ah ee kuhoos nool wadamadaas. Israac raacinta qoomiyadaha Geeska Africa ayaa intooda badan kadhashay kala qaybintii Africa ee ay sameeyeen gumaysigii reer Yurub. Colaadaha joogtada ah iyo xasilooni la,aanta siyaasadeed ee qaarada Africa guud ahaan gaar ahaan G.Africa ayaa wuxuu sababay dhibaatooyin fara badan oo isugu jira dhimasho dad, duunyo, duurjoog, barakac iyo burbur deegaan. Dagaaladii sokeeye ee kasocday dalka Sudan marka laysku daro kii 1aad iyo 2aad ayaa waxaa kunaf wayday tiro aad u badan oo dad ah inkaloo badana way kubara kaceen, qaybtii 1aad ee dagaaladii sokeeye ee Sudan oo biloowaday 1955-1972 di oo qudha ayaa waxaa kudhimatay 500,000 oo ruux. Malaayiin qofna way kubara kacday. Sidoo kale dagaalkii OGADEN WAR 1977-78 ayaa isagana waxaa kudhintay kumanaann ruux, tiro lagu qoyaaso 600,000 ilaa iyo 800,000 na way kubara kacday, dagaaladii Eritrea ay kaga xorowday gumaysiga Itobiya ayaa sidoo kale tobanaan kun ku nafwaayeen, midkii ay qawmiyadda Tigray kula dagaalantay Mingistu ayaa iyagana keenay dhimasho iyo barakac badan, dagaalkii xoriyad raadinta Jabuuti ayaa isagana dhibkiisa lahaa.
Xasilooni darada hada jirta
Jabhadihii kusalays naa qabiilada Somalida sida SSDF, SNM, USC, SPM iwm ee hubka iyo saanada kala yimid Ethiopia oo ay ka dhaxaysay colaad soo jireen ah iyaga iyo Somalia ayaa keentay ugu dambayntii in ay burburto dawladii Somalia, taas oo keentay 15 sano oo dawlad la,aan ah iyo dagaal sokeeye oo daba dheeraaday oo keenay dhimasho, barakac iyo burbur deegaan oo ay adag tahay sida looga soo kabto. Sidoo kale xukun isbadalkii kadhacay Ethiopia ayaan isna soo kordhinin wax wayn marka laga hadlayo Itoobiya gudaheeda, gobolka ay Somalidu dagto ee Ogaden ayaa wali waxaa kascoda dagaal hubaysan oo lagaga soo horjeedo xukunka Adisababa, oo ay hormuud katahay jabhadda ONLF oo udagaalamaysa xoriyad gaadhsiinta gobolka. Sidoo kale inkasta oo ay xoriyad qaadatay hadana dhibaatada xuduudeed ee udhaxaysa Itoobiya iyo Eritrea ayaa wuxuu keenay dhimasho kor udhaaftay 70,000 oo ruux walina lagayaabo in uu dib ubiloowdo markale. Xaalada Darfuur ayaa iyana ah mid uu caalamku ka wal-wal qabo.
Macna ahaan Abaartu waxay dhacdaa marka qiyaasta di,ida roobku uu aad uga hoos maro cadadkii ka di,i jiray meesha ay abaartu kadhacday. Sidii aan horay usoo sheegnayba, gobolka Geeska Africa intiisa badan waa dhul kulayle ah, oo ay kuyar yihiin dabeeciyan roobabku, si simana aysan ooga di,in cadceeduna kubadan tahay. Hadaba Abaaraha kadhaca Geeska Africa ayaa ahaa kuwo soo noq noqonayay oo 30 kii sano ee lasoo dhaafay tobankii sanaba ugu yaraan waxaa kadhacaysay abaar. Shaxdan hoos kuqoran ayaa bayaaminaysa abaarihii kadhacay Geeska Africa laga soo bilaabo 1973 ilaa iyo 2000. Hadaan taariikhda dib u jaleecno, laga soo bilaabo 1973kii Itobiya waxaa ka dhacay 4 abaar oo keenan macaluul ama dhimasho dad gaaraya ilaa 30 milyan oo qof, sidoo kale Sudaan waxaa ka dhacday 2ba abaar oo hakeeshay dad gaaraya ilaa 10milyan, Somaliya 3ex jeer ayay abaaruhu haleeleen dad aan ka yareyn 2 milyan ayaana wax ka soo gaareen, dalalka kalena sidoo kale ayay abaaruhu u wax yeeleeyeen mudadaa.
Hadaba guud ahaan musiibooyinka ay abaartu kamidka tahay, waxaa loo kala qaada laba qaybood oo kala ah mid ay keentay dabeecadu (Rabaani) iyo mid ay keeneen aadamuhu. Mida rabaaniga ah waa mid udhacda si xili xili ah oo matalan waa roobkii oo lawaayo, laakiin mida bani aadamku uu keeno ayaa ah mid sii xumaysa xaalada ooy waliba adagtahay in laga soo kabto. Dhibaatooyinka uu bani,aadamku keeno waxaa kamid ah xaalufinta dhirta, nabaad guurka kudhaca ciida, bur burinta biya mareenka iyo biyo qabiteenka, sida togoga, Laagaha, Wabiyada iyo baliyada oo xabaalma ciida kusoo shubmaysa darteed, taas oo dhalisa biya yaraan badan oo sababta in ay dad iyo duunyo badani u dhamaadaan Haraad.
Hadaba markaad eegto musiibada abaareed ee kataagan Geeska Africa waxaa la odhan karaa inteeda badan waxaa keenay aadamaha, oon qudhooda usii kala saari doono mid ay keentay Maamul iyo maarayn xumo iyo mid kadhalatay ficilada tooska ah ee ay shacabku samaynayaan, waxaana odhan karaa cimiladu waxay kuleedahay qayb aad uga yar tan ay aadumuhu keeneen.
Maamul iyo maarayn xumida.
Sidii aan kusoo sheegnay qaybtii hordhaca ahayd ee qormadan, Geeska Africa waxaa kajirtay mudo dheer xasilooni daro siyaasadeed, taas oo sababtay arimo dhawr ah oo ay kamid yihiin kuwan soo socda:
o	Nabadgalyo la,aan
o	Aqoon yari iyo Masuuliyad xumo.
o	Musuq maasuq
o	Caddaalad dari
o	Xukun maroorsi
Lixdaa qodob een kur kutaxay oo ay keentay xasilooni yarida guud ee kajirta G.Africa ayaan kusaleeyay in ay 60% abaaraha kadhaca geeska Africa ay ka masuul yihiin Maamulada iyo Xukuumadaha kajira G.Africa. Maxaa yeelay nabadgalyo la,aantu waxay keentay in aan lagu dhaqaaqi karin wax horumar ah haba yaraatee, waxaa kalooy sababtay in dadkii aqoonta lahaa ee dhibaatooyinka wax kaqaban lahaa ay isaga cararaan wadamadoodii ooy nabadgalyo uraadsadaan wadamada reer Galbeedka, daraasad dhawaan laga soo saaray dalka maraykanka ayaa lagu sheegay Dadka aqoon yahaniinta ah ee kasoo carara dalalkooda in ay ugu badan yihiin kuwa kayimaada Itoobiya, oo kamid ah Wadamada ugu saboolsan Caalamka. Sidoo kale aqoon yarida iyo musuq maasuqa ayaa sababay in aysan awood uyeelan in ay waxbadan wax kaqabtaa. Meesha uu xukun maroorsiga iyo Caddalad daridu ay yihiin aabaha dhalay Nabad galyo darida Gobolka kajirta. Dhibaada ay keenaan dadka rayidka ah waxa kamid ah Jarida dhirta, Gubida Cawska iyo dhirta, badinta Tuulooyinka, fidinta dhul beereedka IWL.
1. Biyo La,aanta
G.Africa waxaa kajira Afar xili oo kala qaybsan oo laba xili oo kamid ah ay yihiin xili roobeedka (Gu iyo Dayr), waxaa sida qaalibka ah dhacda in aan maqalo meel hebla (X) waxaa kada,ay roobab waxaana kudhintay dad iyo duunyo badan guryana way qaadeen, mudo yar kadib isla meeshii nafteedii ayaad maqlaysaa waxaa kajira oon iyoo biyo la,aan ay dad iyo duunya badani udhamanayaan?
Waa arin mudan in layswaydiiyo, in ay meeshaasi kajirto roob yaraan iyo in ay kajirto Maarayn la,aan. Anigu waxaan qabaa in Gobolka G.Africa guud ahaan tii ay helaan Biyo kufilan hadii si haboon oo joogta ah loo maareeyo, iyada oo la adeegsanayo qaabab dhawr ah oo cilmi ahaan loo ogaaday.
a) Biyaha roobka oo la goosto ama laxajisto :
Biyaha ka imaanaya cirka ee laynaya dadka iyo duunyada waxaa waajib ah in si haboon loo maareeyo dadkana loo kaydiyo si ay u isticmaalaan xiliga diraacda. Sidoo kale waxaa lagama maar maan ah in lahelo macluumaad (Data) ku saabsan isticmaalka biyaha iyo tirada dadka kunoo deegaanka, taas waxay sahlaysaa in xili kufilan lasii ogaado dadku biyaha ay haystaan inta ay la,egyihiin, in ay kufilan yihiin iyo inkale.
b) Hagaajinta Biya qabateenka (Water chatchment improvement)
Dadka reer miyaga ah sida qaalibka xiliga roobka maysan kacabi jirin ceelasha ee waxay kacabi jireen Baliyada iyo Laasaska, taasi waxaad moodaa in ay hada hoos u dhacday waxaana isleeyahay aragtidayda waloow aanan goobta tagin in ay ugu wacan tahay Baliyadii oo xabaalmay iyo Laagihii oo isbadalay taas oon cilmi ahaan uran karo waa ay xabaalmayaan oo salkii hoose ee biiya qabiteenka ahaa ayaa kor usoo kacaya.
c) Daryeelka Biya dhaca (Watershed Protection)
Waxaa inbadan dhacda in xaalufinta dhirta iyo isbadalka uu keeno Nabaad guurku darteed ay wax iska badalaan biyo mareenadii hore, iyada oo ay ugu wacan tahay burburka kuyimid biyadhaca. Arintaasi waxay wax yeelo wayn ugaysanaysaa togagii iyo laagihii ay biyuhu soo mari jireen dadkuna ay laasaska kaqodan jireen iyo waliba dhul beereedkii.
Nabaad guurka G.Africa kajira ayaa wuxuu yahay mid kusocda xaawli aad badan, oo hadii aan sida ugu dhaqsaha badan wax looga qaban keeni doona dabar go kuyimaada noole iyo manoole badan (biotic and abiotic) oo ay kutiirsan tahay nolosha dad baadan oo kunoo Gobolka. Dadka G.Africa guud ahaan gaar ahaan kuwa Afka Somalliga kuhadla waxay 85 % ubadan yihiin dad reer miyi ah, guud ahaana dhaqaalaha dadku miyi iyo magaalaba wuxuu kuxidhan yahay xoolaha nool, sidaa darteed markii ay dhacdo abaar xooleed waxaa hubaal ah in ay iyana dhacayso abaar dadeed, waayo noloshooda ayaa isku xidhan. Nabaad guurkan ayaa waxaa keenay arimahan soo socda:
Jarida Dhirta (Deforestation)
	Dadka kunoo gobolka G.Africa waxay qiyaas ahaan 95% kahelaan tabarta ay wax kushitaan dhuxusha iyo xaabada, sidaa darteed daadku marna kaba baaqsanayaan shidida iyo Jarida Geedaha si ay uga dhigtaan Xaabo iyo Dhuxul.
	Waxaa iyana aad usoo badanaya dadaka reer miyiga ah ee usoo guuraya magaalooyinka, kuwaas oon haysanin dhaqaale ay kudhisan karaan guryo dhagax ah, sidaa darteed ayay markale soo jaraan geedihii si ay uga dhigtaan tiir iyo dhis.
	Dadka reer miyiga ah oo awalba dhaqan ulahaa in ay guur guuraan, ayaa waxaa hada sii batay geedigoodii, daaqa oo yaraaday darteed, kuwaas oo meeshay degaanba ka oota xero cusub iyaga oo soo jaraya dhir hore leh.
	Nadaam darada kadhalatay Dowlad la,aanta Somalia ayaa keentay in uu ruux walba kudhaqaaqo sidii uu qaybtiisa uga qaadan lahaa dhibaatada lagu hayo deegaanka, arintaas oo kusoo kordhisay Jarida dhirta barnaamij cusub aadna uqatar badan oo ah Dhoofinta Dhuxusha, barnaamijka dhoofinta dhuxusha ayaa kamid ah runtii waxyaabaha naxdinta leh ee kusii kordhaya dalka oo dhan gaar ahaan gobolada koonfureed Jubooyinkuba ha,ugu daraadeen. Waxayna ubaahan tahay talaabo Heer caalami ah.
	Wax soo saarka dhulbeereedka oo aad hoos ugu dhacay ama noqday mid laysagaba tagay (abandoned),Degradation ka kudhacay dartiis, ayay meeloo badan waxay bilaabeen dadku in ay dhul cusub baneeyaan oo ay dhirta kajaraan si ay mudo kooban utabcadaa (Slash and burn cultivation).
Shantaa qodob een kor kucalaamadeey ayaan odhan karaa waxay laf dhabar uyihiin Xaalufinta dhirta iyo nabaad guurka.
1.	Xaalada mustaqbalka G.Africa waa mid aad uwalaac badan una baahan in si cilmiyaysan wax looga qabto.
2.	In si heer caalami ah loo dhaxgalo xasilooni darada G.Africa oo laxaliyo kacdoomada siyaasadeed ee kajira waa furaha mustaqbalka gobolka oo dhan.
3.	Xaaladaha Abaaruhu waxay ahaanayaan kuwo sii socda hadii aan qaab horu marin ah loo wajicin
4.	Barnaamijka Gargaarka degdega ah ee loofidiyo wadamada G.Africa ma,ah xal wax kaqaban kara mustaqbalka dhaw iyo kan fog midna, hadii aan gobolka loo samaynin Marshal plan dheer.
5.	Shucuubta gobolka kunool iyada ayaa iska saari karta mashaqada haysata, laakiin gargaarka Caalamku waa uun mindi laba afleh, marna way kudib ridayaan oo waad isku halayn marna in ay kubad baadiyaan ayaa laga yaabaa.
6.	Waxaa lagama maar maan ah in aqoon yahanada Geeska Africa udhashay ay isugu yimadaan shir heer gobol ah ooy kaga wada arinsanayaan sidii dadka iyo deeganka loo bad baadin lahaa.
7.	In shacabka Somalidu ay udagaalamaann sidii ay isaga xorayn lahaayeen qaawlaysata haysata ee ay uxidh xidhan yihiin 15 ka sanadood.
8.	In ay beesha caalamku saaraan Caddaadis dheeraad ah xukuumadaha G.Africa ee kuhaysta xukunka xooga, shacabkana baday Gaajo, barakac, Xabsi iyo dil intaba.
Eng. Badal Ahmed Hassan